Portal:Tantara - KoloikoWiki
Eto no pejy fandraisana hidirana amin'ny tantaran'i Madagasikara.
Ovay ireo takelaka notsongaina
Ireo tantara niditra farany
Taloha tamin’ny andron’ny faha mpanjaka dia nanjaka tokoa ny fanompoana Sampy. Isan’izany sampy malaza sy notompoina tamin’ izany Ramahavaly. Izy dia sampy ody mamba, ody mosavin’olona, ody aretina. Izay rehetra misy dia afany daholo. Avy any Matitanana atsinanan’ Ikongo no niavian’i Ramahavaly. Ramahavaliarivo no nanana azy, ary noraisin’Andrianampoinimerina avy hatrany izy nony azony. Bibilava no tena filalaon’io sampy io ka raha te hanompo azy ny olona dia miantso bibilava. Tao Amboatany no nisy azy. Lasa bibilava ivavahana izy.
Retrieved from "https://koloiko.com/wiki/index.php?title=Portal:Tantara&oldid=116"